पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै भोलि नेपाल बन्दको घोषणा!कति दिन हुने भयो बन्द? |
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै भोलि नेपाल बन्दको घोषणा!कति दिन हुने भयो बन्द?
June 22, 2022 adminLeaveaComment on पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै भोलि नेपाल बन्दको घोषणा!कति दिन हुने भयो बन्द?
बुटवल । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले बुटवलमा प्रदर्शन गरेको छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पस अगाडि सडकमा जम्मा भएका विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै सडकमा टायर बालेर केहीबेर सवारी साधनलाई चल्न नदिएका हुन् । प्रदर्शनमा बोल्दै अनेरास्ववियु रुपन्देहीका अध्यक्ष शेषकान्त पोखरेलले सरकारले नागरिकलाई राहत दिनुको साटो निरन्तर मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेकेको आरोप लगाए ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
देशमा अहिले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल को भाउले आकास छोएको छ । प्रतेक हप्ता हप्तामा मूल्य बृद्दी भएको छ । अब बाईक चढेर हिन्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ । आज पनि ठाउँ ठाउँमा चक्का जाम र टायर हरु दनदनी बलेको अवस्था छ । आज कहाँ के के भयो कति नोक्सानी भयो हेर्नुहोस पूरा विवरण ।
मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नभए जिल्लाव्यापी आन्दोलन चर्काउने पोखरेलले चेतावनी दिए । नेपाल आयल निगमले आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको थियो । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरी १९९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी डिजेल र मट्टितेलमा २७ रुपैयाँले वृद्धि हुँदा १९२ रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मुल्य वृद्धि गरेपछि विराटनगरमा यातायात व्यावसायी र मजदुरले सोमबार बिहान चक्काजाम गरेका छन्।
आइतबार रातिबाट निगमले डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको छ । मूल्य वृद्धिको विरोधमा सार्वजनिक सवारी यातायात मजदुर र सञ्चालकले कोसी राजमार्गको विराटनगरको राजवशी चोकमा सडक खण्डमा सवारी साधन राखेर यातायात अवरुद्ध गरेका हुन् ।
मूल्य वृद्धि भएपछि एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १९९ रुपैयाँ पुगेको छ भने एक लिटर डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १९२ रुपैयाँ पुगेको छ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
रवि लामिछानेको आफ्नो पाइला राजनितीक क्षेत्रमा राखेको भर्खर सुरुवात मात्र के भयो,हरिशरण लामिछानेले गरे रवि लामिछाने बारे यस्तो घोषणा। याे सुन्दा कसैलाई चित्त पक्कै पनि बुझ्दैन।
७ वर्षिय यो सानी नानीको बारेमा थाहा पाउँदा कसको मन नरोला र?भगवान यति निष्ठुरी किन?
महाधिवशनको मुखैमा एमालेका चर्चित नेताले दिए राजीनामा,तनावमा ओली
खुसिको खबर–सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता
७२ लाख रुपैयाँ पर्ने यो हो संसारकै महँगो सिरानी ! June 29, 2022
पैसाका लागि गायिका सुनारको हत्या:प्रेमी सूर्यलाई पाँच दिन थुनामा राख्न अनुमति June 29, 2022
प्रेमीसँग बन्जीजम्प गर्न गएकी युवती डोरी नबाँधी हाम्फालेपछि… June 29, 2022
५ जना पुरुषसँग विबाह गरेर डिर्भोस माग्दै पैसा असुल्दै आएकी भावना पुर्पक्षका जेल चलान June 29, 2022
आमा बन्दै आलिया भट्ट June 27, 2022
फोनमा छुट्टी मिलाएर आउँछु भनेकी छोरि, ला”स बनेर आएपछि आमाको रुवाबासी (भिडियो हेर्नुहोस) June 26, 2022
म्याग्दी बाट आयो डरलाग्दो खबर। June 26, 2022
अब घरबाटै मतदाता नामावली दर्ता पाइने।यसरी गर्नुहोस् नामावली दर्ता। June 26, 2022
को-रोना सङ्क्रमण दर बढ्न थालेसँगै, विज्ञहरुले दिए चौथो लहर आउने चेतावनी ! June 26, 2022
सचिनबारे बाहिरियो यस्तो नसोचेको कुरा(भिडियो हेर्नुहोस) June 26, 2022